Melanoma (မှဲ့ကင်ဆာ ) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Melanoma (မှဲ့ကင်ဆာ )
Melanoma (မှဲ့ကင်ဆာ ) ကဘာလဲ။
Melanoma ဆိုတာ အလွန် အရေးကြီးတဲ့ အရေပြားကင်ဆာရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းဟာ melanin ဆိုတဲ့ အရေပြားကို အရောင်တင်ပေးတဲ့ အရာတွေကိုထုတ်ပေးတဲ့ ဆဲလ်(melanocytes) တွေ ကမောက်ကမ ဖြစ်ရာကနေ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ရောဂါဖြစ်ပါတယ်။
melanoma အများစုကတော့ အသစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ မှည့်တွေကနေ ဖြစ်တတ်ကြသော်လည်း တစ်ချို့မှာ တော့ ရှိပြီးသား မှည့်ကနေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ melanoma က မှည့်ကနေအစပြုပြီး အနီးအနားတွေကို ပြန့်နှံ့ရကာနေ အရေပြားအတွင်းထဲသို့ဝင်သွားပြီးနောက် ပြန်ရည်ကျိတ် တွေကနေ နောက်ဆုံးမှာ အဆုတ်၊ အသည်း၊ ဦးနှောက်နှင့် အရိုးတွေထိပဲ ပျံ့နှံ့သွားနိုင်ပါတယ်။
Melanoma (မှဲ့ကင်ဆာ ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
Melanoma ဖြစ်နိင်ချေများတာကနော့ အသက် ၄၀ အောက်လူတွေ အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးတွေမှာ အဖြစ်များပါတယ်။ ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေကို လျှော့ချခြင်းအားဖြင့် စီမံနိုင်ပါတယ်။ အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Melanoma (မှဲ့ကင်ဆာ ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
Melanoma ရဲ့ အဖြစ်အများဆုံးရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့
• မှည့်၏ အနားသားများ ပုံမှန်မဟုတ်ခြင်း
• မှည့်က ကြီးလာခြင်း
• မှည့် အရောင် ပြောင်းလာခြင်း
• မှည့်တွေက ပျက်စီးလာပြီး သွေးထွက်လာခြင်း
• ဂလင်း တွေ ရောင်လာခြင်း
• အရိုးကိုက်ခဲခြင်း(မှဲ့ကင်ဆာ က အရိုးကို ရောက်သွားတဲ့ အခါ)
• အမြင်အာရုံ ပြဿနာများ(မှဲ့ကင်ဆာ က ဦးနှောက်ကို ရောက်သွားတဲ့ အခါ)
အောက်ပါအကြောင်းအရာများရှိပါက ဆရာဝန်နဲ့ ပြသသင့်ပါတယ်။
• မှည့် ကပျံ့နှံ့လာပြီး အရောင်ရင့်လာလျှင်
• မှည့်အရောင် သို့ အရေပြားရဲ့ အမဲစက်တွေက အနီရောင်ပြောင်းလာပြီး သို့ အမဲစက်တွေရဲ့အနားက အမဲရောင် အရေပြားက အညိုရောင်သန်းလာသောအခါ
• မှည့်တွေမှာ အရည်ထွက်ခြင်း၊ သွေးထွက်ခြင်း သို့ အနာဖြစ်လာလျှင်
Melanoma (မှဲ့ကင်ဆာ ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
Melanoma ကိုဖြစ်စေတဲ့ အရာများမှာ
• နေရောင်မှာ ပါတဲ့ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် သို့ melanin (မယ်လနင်) ဖန်တီးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကို ကမောက်ကမ ဖြစ်စေတဲ့ ခရမ်းလွန် အလင်းရောင်။
• မျိုးရိုးဗီဇ သန္ဒေပြောင်းလဲခြင်း။
Melanoma (မှဲ့ကင်ဆာ ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
Melanoma ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်
• ပြင်းထန်စွာ နေလောင်ခံရခြင်း
• နူးညံ့တဲ့အသားရေ ပိုင်ဆိုင်ထားခြင်း
• တင်းတိတ်ပေါက်တဲ့ အရေပြား
• အရေပြား အရောင်ချွတ်ဆေးသုံးခြင်း
• Melanoma ဖြစ်ဖူးတဲ့ မိသားစု ရာဇဝင်ရှိခြင်း
အထက်ပါဖြစ်ပွားနိုင်ချေများ မရှိခြင်းကြောင့် သင့်မှာ melanoma မဖြစ်ဘူးလို့ ပြောလို့မရနိုင်ပါဘူး။ ဒီအချက်လက်များဟာ မှီငြမ်းကြည့်ရှုဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင် ဆွေးနွေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
Melanoma (မှဲ့ကင်ဆာ ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
Melanoma ကို အတည်ပြုပေးမဲ့ စမ်းသပ်ချက် အချို့ကတော့
• မှည့်ရဲ့ ပုံစံ၊ အရွယ်စား၊ နှင့်အရောင်တို့အား လေ့လာစဉ်းစားခြင်း
• အရေပြား အသားစ ယူခြင်း
ဓါတ်မှန်၊ ခေါင်းနှင့် အရိုး ကွန်ပျူတာဓါတ်မှန်(CT) ရိုက်ခြင်း
Melanoma (မှဲ့ကင်ဆာ ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
အစောပိုင်း အခြေအနေမှာ ဆိုလျှင် ဆရာဝန်က အရေပြားကင်ဆာနှင့် ၎င်းပတ်ဝန်းကျင်နေရာတစ်ချို့ကို ခွဲစိတ်နိုင်ပါတယ်။ melanoma ဘယ်လောက်ထိ ပျံ့ နှံ့လဲ အပေါ်မူတည်ပြီး အရေပြားပမာဏကို ဖယ်ရှားပါတယ်။
ကင်ဆာက ဘေးနားက ပြန်ရည်ကျိတ် တွေထိ ပြန့်နှံ့ နေလျှင် ၎င်း ပြန်ရည်ကျိတ် တွေပါ ဖယ်ရှားရပါလိမ့်မယ်။ ခွဲစိတ်ပီးနောက်မှာတော့ သင့်ကို interferon လို့ခေါ်တဲ့ ဆေးတစ်မျိုးပေးပါလိမ့်မယ်။
ကင်ဆာက တစ်ခြားကိုယ်ခန္ဒါအစိတ်အပိုင်းတွေထိ ပျံ့နေပြီ ဆိုရင်တော့ ခွဲစိပ်ခြင်း၊ကင်ဆာဆေးပေးခြင်း နှင့် ဓါတ်ရောင်ခြည်ပေးခြင်းတို့က ရောဂါလက္ခဏာတွေကို သက်သာစေပေမယ့်လဲ လုံး၀ အကင်းမပျောက်စေနိုင်ပါဘူး။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက Melanoma ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် Melanoma ကိုကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတဲ့နေရာတွေမှာ အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
• ရောဂါ အခြေအနေနဲ့ သင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေတို့ကို သိရှိနိုင်ရန် ပုံမှန် ရက်ချိန်းပြန်ပြပြီး စမ်းသပ်မှု ခံယူပါ။
• အသားညိုအောင် လုပ်တဲ့ Tanning booths တွေကို ရှောင်ပါ။
• သင့်ကိုယ်တိုင် သင့်အရေပြားကို အနည်းဆုံး တစ်လမှာ တစ်ကြိမ်လောက်တော့ လေ့လာစစ်ဆေးပါ။ သင့်ခန္ဒါကိုယ် အနှံ့က ရှိပြီးသား မှည့်တွေ သို့ မှည့်အသစ်တွေကို ကြည့်ပါ။
• နေလောင်ဒဏ်ကို အကောင်းဆုံးကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ SPF 30 အထက် ရှိတဲ့ နေလောင်ခံခရင်မ်တွေကို လိမ်းပေးပါ။
Ferri, Fred.Ferri’s Netter Patient Advisor.Philadelphia, PA: Saunders / Elsevier, 2012. Print edition. Page 117
Melanoma.http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/melanoma/basics/definition/con-20026009. Accessed Jul 14 2016
Melanoma.https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000850.htm.Accessed Jul 14 2016Ferri, Fred.Ferri’s Netter Patient Advisor.Philadelphia, PA: Saunders / Elsevier, 2012. Print edition. Page 117